▷ Philips Airfryer HD9220 / 20 ▷ Falanqaynta, Fikradda iyo Qiimaha ugu Fiican 2022
Sanadihii la soo dhaafay, dhowr Saliida Philips Free Fryers Magaca guud ee Airfryer, oo loo turjumay Isbaanishka macneheedu waa Qaboojiyaha Hawada. Aad uma ay adkaan raadinta magaca 🙂!
Magacooda waxaa laga yaabaa inuusan asal ahayn, laakiin waa inay wax sax ah sameeyeen, sababtoo ah mid ka mid ah moodalkiisa waa mid ka mid ah iibiyeyaasha ugu wanaagsan dalkeena, gaar ahaan Viva Collection Airfryer HD9220 / 20 oo leh tignoolajiyada degdegga ah ee hawada ee la ruqseeyay.
Qormadan waxaynu si qoto dheer ugu falanqeyn doonnaa inagoo eegayna keeda sifooyinka, dib u eegista isticmaalaha kuwaas oo isku dayay iyo meesha aad ka iibsan kartaa. Intaa waxaa dheer, sida caadiga ah, waxaan barbar dhignaa moodooyinka kale ee la heli karo Maqashay cunto karinta!
* Digniin: Qaabkan lama heli karo, laakiin waad ku beddeli kartaa tan mid kale oo ka yimid Philipp oo leh astaamo isku mid ah.
Iibso Philips HD9220/20
➤ Iftiiminaya Philips HD9220
➤ Philips HD9220 / 20 Saliid Saliid ah oo bilaash ah
➤ Sidee buu u shaqeeyaa Philips Airfryer?
➤ Dib u eegis Philips Airfryer HD9220/20
➤ Iibso hawo-qaade HD9220 Fryer
Sida caadada u ah qoraaladayada. si aan u bilowno waxaynu dib u eegis ku samaynaa sifooyinka sida aadka ah u taagan qalabka la doortay.
▷ 800 oo garaam awoodda
Qodob muhiim ah oo ka mid ah qalabkani waa awoodda cuntada oo aad karsan karto hal mar. Qaabka HD9220/20 wuxuu awood u leeyahay 800 garaam, taas oo ku filan qaadashada laba ilaa saddex qof. Marka tan la eego, waa qalab ka mid ah moodooyinka leh awoodda ugu yar ee buug-yaraha shiilan caafimaad leh.
▷ 1425 W quwad
Fryer-kan waxa uu ku qalabaysan yahay iska caabin ah 1425W oo ah awoodda ugu badan, isagoo gaadhaya a ka sarreeya celceliska saamiga awoodda-karti. Tani waa mid ka mid ah sababaha kuu ogolaanaya inaad sidaas hesho natiijooyin wanaagsan waqtiyo gaaban.
Awoodda Airfryer-kan waxa lagu maamuli karaa heerkulbeeye analooga ah inta u dhaxaysa 80 iyo 200 darajo senti ilaa la qabso habka iyo nooca cuntada ee la doortay.
▷ Tignoolajiyada Hawada Degdegga ah ee Patented
Mid ka mid ah khasaaraha ugu badan iyo cabashooyinka isticmaalayaasha shiilaya hawo kulul ayaa ah inay waqti ka badan ku qaataan diyaarinta cuntada. Philips waxa uu u fasaxay tignoolajiyada loo yaqaan Rapid Air yaree wakhtiyada wax-karinta oo gaadh dubista cuntada oo isku mid ah.
Waxay ku salaysan tahay naqshad gudaha ah oo waxay hagaajisaa wareegga iyo xawaaraha hawada kulul ee u dhexeeya cuntooyinka, wax aad muhiim u ah si loo helo natiijooyin wanaagsan.
▷ Saacadaha laga bilaabo 0 ilaa 30 daqiiqo
Philips Airfryer 9220 wuxuu leeyahay saacada analooga ah oo aad dejin karto inta u dhaxaysa 1 iyo 30 daqiiqo ugu badnaan si aad u damiso wakhtiga la rabo. Intaa waxaa dheer, shaqadeeda xiritaanka tooska ah waxay leedahay a dhame dhawaaq dhawaaq si aad noogu soo sheegtid si aadan uga warqabin.
Fryer-ku ma laha ikhtiyaar shid joogto ah iyada oo aan waqti la helin, malaha sababo ammaan dartood si aanu waligiis u sii joogin ilaa xad.
Si loo fududeeyo nadiifinta, HD9220/20 waxaa lagu qalabeeyaa a khaanadaha aan dhegta lahayn iyo dambiisha la saari karo oo lagu dhaqi karo weelka weelka. Shaki la'aan, waa faa'iido weyn oo naga badbaadisa wakhtiga iyo shaqada ka dib karinta.
Sidoo kale, leh dhammaan shiilan hawo kulul waanu iska ilaalinaa firirka oo ur yar ayaa soo baxa inta aad diyaarinayso cuntada.
Qaabkani waa nooca khaanadaha ee gacanta ku leh naqshaddeeduna waa mid nadiif ah oo aad u yar, midab madow ama caddaan ah. Banaanku waxa uu ka samaysan yahay balaastiig waana qabow in la taabto, xoogaa muhiim ah in laga fogaado gubashada. Habkani wuxuu noqon karaa mid xiiso leh gaar ahaan haddii aad carruur ku leedahay guriga, waxaan horayba u ognahay sida ay u jecel yihiin in ay wax walba la qabsadaan. Waxa kale oo lagu qalabeeyaa cago aan simbiriirixan lahayn oo xadhig leh waxtar badan.
Cabirka: 28,7 x 31,5 x 38,4 y Miisaanka qiyaastii. oo ah 6 Kgs
▷ Buugga cuntada lagu shiilo ee Saliida Xorta ah ee Philips
Philips ma rabo inaad isticmaasho Fryer-kooda Korantada ee aan Saliida lahayn kaliya si aad u samayso shiilan dufan yar, waxay rabaan inaad isticmaasho dubista, dubista, shiilan iyo xataa dubay. Si aad uga faa'iidaysato waxa ku jira buug cuntooyinka nooc kasta ah oo ay sameeyeen khubarada.
Waxa intaa dheer in buugga cunto karinta in aad ka heli doontaa iibsashadaada, aad soo dejisan kartaa ay free Philips Airfryer Android / iOS app waxa ka mid ah:
In ka badan 200 oo cuntooyin macaan ayaa tallaabo tallaabo loo sharraxay
Talooyin iyo tabo aad ku ilaalinayso hawo-fryerkaaga nadiif
Hilibka cuntada ee sumadda ugu iibka badan waxaa ku jira 2 sano oo dammaanad ah, ugu yar ee lagu dejiyay sharciga Spain.
Waxaan horay u soo sheegnay taas qiimaha ee mashiinada ugu fiican saliid la'aan way ka sarreeyaan kuwa caadiga ah Philips-na ma aha summada ugu jaban. Qiimaha waa ku dhawaad ​​150 euro, in kasta oo ay kala duwan tahay iyadoo ku xiran dalabyada daqiiqad kasta iyo bannaan inta badan waa xoogaa ka jaban.
Waxaad arki kartaa qiimaha hadda jira adiga oo gujinaya badhankan:
Eeg Qiimaha Fryer HD9220
Muuqaalkan kooban waxaad arki kartaa qaar ka mid ah faahfaahinta qaliinka ee qalabkan cusub 🙂
Inta badan, fikradaha ku saabsan shiilan saliid la'aanta ah ee Philips waa kuwo aad u wanaagsan. Amazon waxay helaysaa dhibco ah 4.2 marka loo eego 5 iyo bogga philips-ka isticmaalayaashu waxay ku qiimeeyeen 4.3 marka loo eego 5. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa markhaatiyada iibsadayaasha la xaqiijiyay ee tijaabiyay.
Fikradeena, Philips Viva Collection Airfryer HD9220/20 Fryer-ka aan saliida lahayn waa qalab si fiican ayuu u dabooli karaa baahiyaha isticmaalayaasha ugu baahida badan. Waa nooc isku dheeli tiran oo dhinac walba leh, taasoo keentay inuu si wanaagsan uga iibiyo dalal dhowr ah.
In kasta oo ay tahay Fryer oo in muddo ah suuqa ku jirtay, ayaa weli ah mid ka mid ah xulashooyinka la door bidayo macaamiisha. Qiimaha ayaa xoogaa sarreeya, inkastoo la arko qanacsanaanta guud waxaa laga yaabaa inay mudan tahay in wax yar la bixiyo.
Summada Caalamiga ah
Degdeg ah oo waxtar leh
Waxaan is barbar dhignay Philips Airfryer HD9220/20 Fryer Kulul moodooyinka kale ee shirkadda iyo la tartamayaasha qiimaha la mid ah. Arag haddii qaabkani yahay kan ugu habboon baahiyahaaga ama ay jiraan kuwa kale oo ku habboon gurigaaga.
Ma u malaynaysaa in qaabkani uu noqon karo waxa aad u baahan tahay inaad cunto shiilan oo dufan yar leh? Halkan waxaad ka heli kartaa kaaga
(Codadka: 13 Celcelis: 4.4)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Philips Air Fryer » HD9220 / 20